FICUS BENJAMIN "ISKU QAS": DARYEELKA GURIGA, SAWIRO IYO FIIDIYOW MUHIIMA - SOOSAARKA DALAGGA
Qodobbada loo yaqaan "tropics" ee gurigaaga - ficus "Benjamin Mix"
Ficus benjamina wuxuu leeyahay dhowr nooc.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan - Benjamin Mix, ama, luuqadda sayniska, Ficus Benjamina Mix.
Waddanku waa tropics, inta badan waxay ku sii badanayaan Koonfur Asiya, Hindiya, Waqooyiga Australia iyo Filibiin.
Tani waa geed xaraar ah, oo lagu magacaabo botanist British Benjamin D. Jackson.
Benjamin Isku darka wanaagsan iyo meesha saxda ah waxay gaari kartaa dherer ahaan 2-3 mitiree duurka ayaa kori kara ilaa 25 mitir.
Caleemooyinkeeda waxay soo gashay laba nooc: cagaar mugdi ah iyo midab-madow.
Iyadoo ku xiran midabka caleemaha, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel joogto ah halkaasoo xayawaankaaga cagaaran uu ku noolaan doono.
Warshad leh caleemo kala duwan ayaa jecel nalka more, oo leh iftiin wanaagsan, midabka caleemaha wuxuu noqdaa mid aad u jilicsan, si ammaan ah ugu rid dhinaca koonfureed ee aqalka.
Laakiin ficus leh caleemo cagaaran madow jecel yahay dhinaca bari iyo iftiinka kala firdhisan, in ka badan xitaa penumbra ah.
Tani waa kirayste aad u awood leh oo u baahan in la fiiriyo, "beeray oo la illoobo" - tani maaha mid ku saabsan.
Ficus wuxuu jecel yahay joogteynta, ma jecla inuu bedelo meelo, iyo dhaqdhaqaaq kasta, haddii uu si joogto ah uga soo socdo meel u dhow, waxaa laga yaabaa inuu ka xumaado, lumiyo caleemaha, iyo xitaa qalalan.
Aad bay ugu xiran tahay milkiilayaasha, iyaga oo seegaya, caleemihiisa waxay bilaabaan inay huruud noqdaan oo ay dhacaan.
Sidaa darteed, waa inaadan la yaabin haddii ka maqnaanshahaaga guriga, xitaa 3-4 maalmood, waxaad arki doontaa gebi ahaanba "gadh" geedka.
Haddii, ka dib oo dhan, dukaanka ubaxa aad indhaha ku dhigay Benjamin, wuxuu keenay guriga, siiba isla markiiba beerista ubax.
Soos (universal for dhirta gudaha) waa in lagu qaso ciid, qiyaastii 1 qayb ka mid ah ciid iyo 2 qaybood oo ciid ah.
U hubso inaad gashey dhoobo dhoobo ah oo hooseeysa dheriga.
Talo: dheriga waa inuu ahaadaa mid yar oo dheer.
Qalitaan ku-xiga (qiyaastii mar 2-dii sanoba mar), xajmiga dheriga waa in lagu soo xushaa qiimaha ficuska.
Daryeel gaar ah waa in la siiyaa waraabinta. Qofka degan gawaarida Ficus Benjamin ma jecla qorshahawuxuu jecel yahay heerkulka diiran ee diirran 22-25 digrii iyo carrada qoyan, waa in lagu waraabiyaa biyo fiican oo dejiya 1-2 jeer todobaadkii xagaaga iyo 1 jeer 10-12 maalmood jiilaalka.
Ha ku dhaafin, qoyaanka xad dhaafka ah waa sida waxyeello u geysataa abaarta, waxay keeni kartaa nidaam xidid ah, sidaas darteed hubi dhulka ka hor waraabinta, lakabka sare waa inuu noqdaa mid qalalan.
Haddii waraabintu aysan ku filneyn, ubaxa laftiisa ayaa calaamad u noqon doona: caleemihiisa ayaa bilaabi doona inay huruud noqdaan.
Talo: Waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo ubaxa leh biyo fiican, gaar ahaan xagaaga, hababka biyaha ee xilliga qaboobaha waa in la dhimo ilaa 1 jeer 2-3 toddobaad.
Ma yeelayso isaga iyo bacriminta, taas oo laga iibsan karo dukaanka ubaxa, waxaa la yiraahdaa "Fikradaha".
Waa muhiim: carrada waxaa la karkarin karaa oo kaliya laga bilaabo guga ilaa dayrta hore.
Ficus Blooms oo kaliya in lagu koriyo oo ku wareegsan yar yar ee inflorescences. Guriga, ma Bloom.
In sawirka ficus Benjamin "Mix":
Ku guuleysta inaad ku habboonaato gudaha guriga ama xafiisyada noocyada kala duwan ee Benjamin ficus sida Barok, Kinki, Natasha, Starlight, King Golden, Anastasia, Daniel iyo Piedolistny.
Benjamin wuxuu ku dhalan karaa caleemaha yar yar ee biyaha lagu hayn karo ilaa iyo inta xididada ay muuqdaan, isla markiiba waxaad ku dari kartaa habka dhulka hoostiisa hoostiisa hoostiisa. Bangiga nadiifinta ka dib.
Benjamin Ficus waxaa la siin karaa qaab kale, kan aad doorbidayso:
jarjir caleemaha dhinaca, dhirta ayaa kor u kici doonta waxayna qaadataa qaab geedka
Iska ilaali dusha sare ee geedka, Benjamin wuxuu ku kori doonaa geed qoyan
Fiidiyowga waxtar leh ee ku saabsan taranta ficus "Benjamin Mix":
Xusuusoin farsamada oo dhan Ficus Benjamina Mix, haddii ay tahay transplanting ama goynta caleemaha for moodaynta, waa in lagu fuliyaa xilliga guga-xagaaga.
Qoyska cagaaran waxay leeyihiin karti u gaar ah oo looga saaro sunta hawada ka soo baxda, waxaanay u raacdaa oksijiin, laakiin waxaa jira waxyaalahan laga jaray.
Ubax, nuugista sunta ayaa laysku halleyn karaa, gaar ahaan dareeraha caanaha ah, oo la sii daayo markii la gooyo caleemo ama caleen, waxaa loo tixgeliyaa inay sun tahay, sidaas darteed, haddii xayawaan ama carruur yaryar oo guriga jooga, waa in laga ilaaliyaa xiriirka ficus.
Martiqaadka kuleylka ah ee jirran ayaa xanuunsan, waana arrin aad dhif u ah in la weeraro cayayaanka. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaatid cadawga qof ahaan.
Inta badan, muluqa iyo maqaarka ayaa dhibaato ku keenaya geedka.
mealybug waxay magaceeda u keentay dheecaan dheecaan leh oo muuqda caleemaha, caleemuhu waxay isu beddelaan jaalle, curl.
Waxaad ka caawin kartaa dhirta adigoo u daaweynaya xal kasta oo cayayaanka ah, waxaa fiican inaad ka saarto caleemaha saameeyeen.
gaashaan iyada oo jirka jirkiisa waxaa lagu dhajiyaa qadka hoose ee caleemaha, dhibco brown muuqan iyaga on, geedka joojin si caadi ah u horumariyaan.
Daaweynta warshadda leh xal cayayaanka ayaa sidoo kale ka caawin doonta inay la qabsadaan gaashanka, ka hor intaan la samayn, cayayaanka cayayaanka ee caleemaha waa in laga saaraa, sida ukunta la dhigo ayaa lagu qariyay jirkooda.
Dabcan fadlan Ficus Benjamin aad u adag, laakiin u qalantaa.
Guryahaaga waxaa jiri doona sharo cad oo ka mid ah kulaylaha iyo kor u qaadista naftaada habeenkii qaboobaha qabow.